Tác dụng thần kỳ của 11 loại rau thơm (Phần 2) | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Tác dụng thần kỳ của 11 loại rau thơm (Phần 2) | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Tác dụng thần kỳ của 11 loại rau thơm (Phần 2) | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
1 1. Imifuno yeMint
3 3. amagqabi e-laksa
4 4. I-Coriander
5 5. Ilethisi
6 6. I-Coriander
1. Imifuno yeMint
I-Mint idla ngokubhidaniswa ne-dill. Amagqabi e-Vietnamese mint adla ngokuba made kwaye abhityile, anesiqu esiluhlaza, ngelixa amagqabi arawndi, arhangqwe kwaye amfusa ngombala.
Amanye amayeza kufuneka agcinwe kwizityalo zeminti:
– Unyango lwamehlo abanzi:
I-Mint, ixutywe ngamanzi e-Ginger ubusuku obu-1, omisiwe, omgubo. 4g ngexesha ngalinye, xuba ngamanzi abilisiwe, hlamba amehlo.
– Unyango lwegazi legazi:
I-Mint 1 enkulu, isandla esibukhali kunye ne-3 izitya zamanzi de zome, kunye nesitya se-1, sisele kabini ngosuku.
– Unyango lwe-nosebleeds olungayekiyo:
I-mint entsha, ikhuphe ijusi, okanye i-mint eyomileyo, thatha amanzi adibeneyo, yifake kwi-cloth (cotton), uyifake empumlweni.
– Unyango lwezinyosi kunye nokulunywa kweembovane (abasanda kuzalwa banokuzisebenzisa)
I-Mint pound, sebenzisa kwinxeba
– Unyango lwe-thrush ebantwaneni:
Geza amagqabi e-mint, qengqeleka kwiincam zeminwe, uhlikihle elulwimini amaxesha ambalwa phambi kokutyisa.
-Nyanga ukugcwala, iintlungu zesisu:
Amagqabi eminti omisiweyo (50g), menthol (50g), 90 degree alcohol (1000ml). Phuza amaxesha amaninzi ngosuku, umxube ngamnye u-5-10 wehla emanzini ashushu ukusela.
Sebenzisa amagqabi amatsha okanye izityalo ezipheleleyo (10 – 20g) kwi-100ml yamanzi abilayo, gquma, yima imizuzu eyi-10, thatha umphunga uwuse umphunga, thatha amanzi atshisayo uwasele, emva koko ugqume ngeengubo ukubila uze wosule.
I-Taboo xa usebenzisa i-mint
+ Abantu abatsha abarhawuzelelwa, musani ukusebenzisa. Ukubila ngenxa yokungabikho kokusetyenziswa (uMthetho woPhando).
+ Ukusela kakhulu okanye ukusela ixesha elide kuya kubanda; I-yin embi ibangela umkhuhlane, ukukhohlela, kunye nokubila: ungasebenzisi (Umbhalo wesandla Phung Nguyen).
+ I-Peppermint ineziqholo, inevumba elimnandi, kwaye iyaphula igesi, ngoko ke ukuyisela ixesha elide kuya konakalisa intliziyo, kwenzakalise intliziyo, kwaye konakaliswe (Inqaku leTung Tan).
+ Ukuba usela kakhulu, kuya kuyonakalisa Intliziyo yakho kunye neCan. Ukuyisebenzisa ixesha elide, ukuyisebenzisa kakhulu, kuya kukhupha yonke i-Qi, ilahlekelwe yin, kwaye yonakalise i-yang. Isifo esandula ukunyangeka: Ukuyeka ukusetyenziswa kuba usoyika ukufa ngokubila. Ukulimala kwangaphakathi, umonakalo, kunye nemiphumo emibi akuvumelekanga. Xa isigulo esimandundu sinyangekile, ukuba usityile, uya kubila ungayeki: yeka ukusithatha (Strength Pharmaceuticals).
+ Abantu abancinci, ubuthathaka ngokubanzi, ukuqhina, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, abantwana abangaphantsi konyaka omnye: akufuneki basetyenziswe (Izibonelelo zeZityalo zonyango zaseVietnam).
I-Basil ikwabizwa ngokuba yi-basil, basil, basil, basil okanye inja basil, imifuno é, emfusa, isiqhumiso saseThai. Izifundo ezininzi kwihlabathi jikelele zibonise ukuba esi sityalo sine-anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, antiseptic, fungicidal properties …
Amanye amayeza aqhelekileyo avela kwi-basil nabani na angasebenzisa:
– Unyango lokukhohlela:
I-Basil, i-lemon basil, amathambo omlambo. Gcoba ngetyuwa encinci kwaye ufunxe.
-Nyanga ukungazinzi, ixhala, intloko ebuhlungu, ukukhohlela, umqala obuhlungu:
Sebenzisa i-20 – 40 iipunitshi zamagqabi e-basil kunye neentyatyambo ezomisiweyo kwi-1 ilitha yamanzi abilayo. Sela iikomityi ezi-2-3 ngosuku.
– Izibonelelo zobisi:
Ukuhlobisa i-basil amaqabunga amancinci kwi-1 ilitha yamanzi, sebenzisa iikomityi ezi-2 ngosuku.
– Impumlo evuzayo, ukugabha, urhudo:
15g amaqabunga e-basil, i-decoction yamanzi, isiselo.
-Nyanga irhashalala, i-allergies:
Amagqabi e-basil (kuquka iintyatyambo, iziqhamo, kunye nembewu ngokusemandleni) ayatyunyuzwa aze acudiswe ukuze asele, kwaye intsalela ihlanjululwa kwindawo ebuhlungu.
3. amagqabi e-laksa
amagqabi e-laksa anevumba elimnandi, indalo eshushu; Unefuthe lokusasaza i-welding, i-digestive, i-antiseptic, ehlala isetyenziselwa ukuvuselela ukucolwa kwesisu, ukunyanga isisu esibandayo, i-flatulence, intlungu yesisu, ukuphelelwa ngumdla, ukutyunjwa kwe-tendon (i-cramps), isifo sohudo. Ikwasetyenziselwa ukunyanga umkhuhlane, njenge-diuretic kunye ne-antiemetic. Isetyenziswa ngaphandle ukunyanga izifo zolusu (intshulube, intshulube) ukulunywa yinyoka kunye nokulunywa yinja eqatha. Sebenzisa i-20 – 30g fresh epondiweyo yonke imihla ngamanzi okusela okanye isiselo esigqwesileyo.
Amanye amayeza alungileyo avela kumagqabi e-laksa:
-Unyango lokuhlaselwa yintliziyo:
Sebenzisa i-50g yamagqabi abukhali e-laksa kwaye wongeze ikomityi yewayini ukusela, ikomityi enye ngexesha ngalinye.
Gcoba amagqabi amatsha e-laksa, khama ijusi ukuze ubilise kwaye usele.
Ngokutsho kukaGqr Le Minh, abantu abaphethwe yi-heatstroke kunye ne-semi-comatose karhulumente kufuneka basebenzise amaqabunga e-laksa 30g, i-ginseng ephambili ye-20g (ifakwe ngejusi yejinja), i-Dingling root (amagqabi amancinci) 16g, iimpethu ze-butt 10g; Iinkwenkwezi ezi-4 zegolide, i-600ml yamanzi, i-200ml umbala, ihlulwe ibe yiziselo ezi-2 ngosuku.
– Unyango lokungacaceli ukutya:
I-lettuce itye kunye neziqholo okanye usebenzise isityalo sonke 10-20g ukusela emva kokutya.
-Nyanga ukhwekhwe, impetigo, iintshulube:
I-lettuce yonke isityalo esifakwe etywaleni. Thatha loo wayini ukuze uyigalele, okanye uyityumze, okanye uyigqume uze uyibophe.
-Unyango lokukhubazeka, imivumbo, ukudumba kunye neentlungu:
Amagqabi e-laksa amatsha acoliweyo axutywe ne-camphor okanye ioli ye-camphor okanye i-camphor alcohol, i-rab okanye i-bandage kwiindawo ezibuhlungu.
– Unyango lokulunywa yinyoka:
Amagqabi e-coriander asetyenziswa esematsha, isityalo sonke siyahlafunwa kwaye siginywe (okanye sicunyuzwe ukukhupha ijusi) kwaye amagqabi agatywa enxebeni. Okanye thatha ama-20 aphezulu amagqabi amatsha e-laksa, ukhame amanzi okusela, kwaye ubeke intsalela.
Nangona amagqabi e-laksa engenatyhefu, abantu banamava exesha elide anikezelweyo ukusuka kumaxesha amandulo: ukusebenzisa amagqabi amaninzi e-laksa kuyingozi ngokwempilo, ukuba ne-erections engalunganga, kunye nobunzima bokuhamba, okanye ukophula igazi, ke xa ukhulelwe. kananjalo ungatyi amagqabi amaninzi elaksa.
I-Coriander ikwabizwa ngokuba yi-coriander. Ngokutsho amayeza emveli, ichiza isiphumo ekusasazeni ukuxilongwa (ukunceda ukukhula ngokukhawuleza imasisi), ukunciphisa ubuthi ukudambisa ubuthi inkqubo ityhefu (ingakumbi imasisi abantwana), ukumangalela ukutya.
Unokusebenzisa amayeza amaninzi alungileyo kwi-coriander anje:
– Ukunyanga iintlungu zesisu ngenxa yokuphazamiseka kokutya
Coriander 8g, Clove 4g, Kumquat 4g, Royal Lien 4g. zonke zihlanjwe nge-500ml ye-decoction ukuya kwi-300ml, zohlulwe kwiziselo ezi-2 emini. Sela useshushu, sebenzisa iintsuku ezi-3 ngqo.
– Ukunyanga ukugabha, isisu esigcweleyo, ubuvila
I-Coriander ihlanjwe, icolile ngamanzi amancinci ukufumana ijusi yokusela i-2-3 yamacephe asebenzayo kakhulu.
– I-diuretic, inceda ukunciphisa i-cholesterol egazini
Thatha i-12g yembewu ye-coriander eyomileyo efakwe emanzini abilayo, ihluzo, ipholile kwaye usele amaxesha amaninzi ngosuku. Iintsuku ezili-15 ikhosi ye-1.
– Unyango lwe-menorrhagia
Imbewu ye-coriander eyomileyo i-6g, ihlanjwe nge-600ml yamanzi, i-300ml ibukhali, yongeza iswekile encinci ukwenzela ukusela lula, yahlulwe amaxesha amathathu ngemini, sela ngelixa ushushu. Sebenzisa iintsuku ezi-3-5.
– Izibonelelo zobisi kubasetyhini abakhulelweyo emva kokubeleka
Isiqhamo esidala se-coriander 6g, i-100ml yamanzi, ubilise imizuzu eyi-15, yohlulwe kwiziselo ezi-2 ngosuku. Sebenzisa iintsuku ezi-3.
– Yenza ulusu lube luhle, lunyange i-acne
Gcoba i-coriander ukuze ufumane incindi emalunga neitispuni e-1, xuba umgubo omncinci we-turmeric, uhlambe ubuso bakho kakuhle, uze usebenzise lo mxube ebusweni bakho ngobusuku bonke ngaphambi kokuba ulale okanye uthathe i-decoction yesiqhamo se-coriander ukuze uhlambe. Eli liyeza lilungile kubantu abanolusu olomileyo, ulusu olune-acne luya kunceda ulusu olupinki, lunciphise i-acne.
Intlanzi ye-lettuce inentlanzi, ke ikwabizwa ngokuba yi “fishery essence”, ukongeza, ikwabizwa ngokuba yi-leaf gip okanye i-cham Thai.
Izifundo zanamhlanje zibonisa ukuba i-lettuce ineempembelelo eziphambili kwi-antibacterial, i-detoxification, i-anti-inflammatory, i-virus blocking, ukuphuculwa kwe-immunity. Nokuba usempilweni, kufuneka usebenzise esi sityalo rhoqo kuba silunge kakhulu empilweni.
Amanye amayeza alungileyo kwisityalo saseAgarwood:
– Unyango lwezifo zokuphefumla:
Gcoba amagqabi e-lettuce kwaye ukhame ngaphandle kwamanzi okanye uzise i-lettuce ngamanzi, uze unike isigulane ukuba sisele.
– Unyango lwe-hemoptysis, i-expectoration ye-sputum kwizigulane ezine-pulmonary tuberculosis:
I-lettuce entsha (malunga ne-30g), ifakwe kwisitya sodongwe, gcwalisa amanzi ukuze udibanise iyure eli-1, uze ubilise imizuzu eyi-1-2 (ulumkele ubilise ixesha elide), susa intsalela ukuze ufumane amanzi, ikhefu. iqanda kumxube; yitya kancinci kancinci; Yidla kanye ngosuku, ngokuqhubekayo iintsuku ezingama-20-30.
– Unyango lwe-bronchitis, inyumoniya:
I-lettuce entsha 60g, ingulube yengulube i-1 iseti, iphekwe kwisuphu; Yidla imiphunga kwaye usele amanzi amayeza, utye kanye emva kweentsuku ezi-2-3, uyisebenzise ngokuqhubekayo malunga neenyanga ezi-3-5. Ngokubanzi, i-lettuce ilungile kakhulu kubantu abanezifo zemiphunga ezifana nenyumoniya, ithumba lemiphunga, i-bronchitis …
Ukunyanga i-otitis media, ukudumba imibhobho yobisi:
Sebenzisa i-lettuce eyomileyo yesityalo esipheleleyo 20g, ijujube (jujube) iziqhamo ezili-10, amanzi 600ml; nangoku 200ml, yahlulwe amaxesha 3 ukusela emini.
– Unyango lweliso elibomvu:
Amaqabunga e-lettuce ahlanjululwa, agxininiswe kwiipads ezimbini ezihlambulukileyo ze-gauze, beka amehlo akho xa ulala, yenza njalo ngamaxesha angama-2-3 ukuba uphiliswe.
-Nyanga i-hemorrhoids, i-rom ephumayo:
I-lettuce ishiya i-6 – 12g decoction yamanzi okusela; Ngelo xesha, decoct amanzi, uthathe umphunga, uze uhlambe. Kunokwenzeka ukudibanisa ukutya okuluhlaza imihla ngemihla, kwaye kwangaxeshanye uthabathe i-lettuce entsha, uyiponde kwaye uyifake kwi-hemorrhoids, igubungele kwaye uyitshintshe malunga namaxesha ama-2 ngosuku.
– Unyango lorhudo:
I-lettuce entsha ishiya i-60g (i-20g eyomileyo), ibukhali ngamanzi, yongeza ishukela elincinci elimhlophe ukusela emini.
– Unyango losulelo lomgudu womchamo:
I-lettuce entsha ishiya i-30g, i-plantain 15g, iinaliti 15g; i-decoction ngamanzi, ihlulwe ngamaxesha angama-2-3 ngosuku.
– Unyango lwe-acute prostatitis:
I-lettuce entsha ishiya i-60g, ihlanjululwe, izaliswe ngamanzi, igalelwe irayisi ngeyure eli-1, emva koko isuse i-residu, ihlulwe ngamaxesha angama-2 ngosuku.
Sebenzisa amanzi ukuhlamba irayisi entsha nengqindilili, yibilise ngobushushu obuphantsi ngamagqabi atyumkileyo elettuce.
Qaphela: Amagqabi elettuce ekrwada anentlanzi kakhulu xa esandula kukhiwa kwaye kunzima ukuwasela. Kodwa xa ifakwe embizeni ukuba ibile, incasa yentlanzi yaphela kwaye kwakulula kakhulu ukusela. Ukuba usana lwakho luyathanda ukusela amanzi anencasa, unokongeza intwana yeswekile ukwenza kube lula kuye ukusela.
– unyango lwe tonsillitis, pharyngitis:
Thatha i-lettuce entsha kwaye uyifake emanzini ashushu njengeti uze uyisele. Kukwakho namagqabi amatsha e-lettuce aqhotsiweyo okanye aphekiweyo okutyiwayo.
-Nyanga usulelo lomjelo womchamo:
Thatha i-50g ye-lettuce entsha okanye i-30g ye-lettuce yeentlanzi ezomileyo, ulole kwaye usele imihla ngemihla.
– Unyango lwamathumba esikhumba:
Thatha i-lettuce ehlanjwe ngesandla, ihafu yeponti, uyibeke kwindawo ye-acne, uyitye i-half yayo ekrwada, ukuba awukwazi ukuyitya ikrwada, ungayityumza ukusela amanzi aneswekile encinci.
Unyango lwe-cervicitis, iintlungu ezisezantsi zesisu:
Thatha i-30 – 60g ye-lettuce entsha + 30g zombini i-dandelion kunye ne-honeysuckle, yongeza amanzi kwisiselo imihla ngemihla.
I-Coriander yaziwa ngokuba yi-coriander, i-cilantro, i-cilantro. Esi sityalo siyakrakra kancinci, sinesiqholo, sishushu, sinevumba elimnandi elinesiphumo sokuqala sokucoca ubushushu, ukonga udakada, i-emphysema, kunye nesiqabu seentlungu.
Amayeza wonke umntu kufuneka awagcine ngenqanawa ye-coriander:
-Nyanga umkhuhlane ongephi
I-30g yevumba lesiShayina, i-50g yenkomo ecolekileyo ephekwe nge-600ml yamanzi kunye neengcezu ezimbalwa zejinja entsha, uze udibanise i-pepper encinci, usebenze ushushu. Emva kokutya, kufuneka uzigqume ngengubo eqinileyo ukuze ubile ukunciphisa umkhuhlane.
– Unyango lwegazi
Inkwenkwezi yegolide i-1 yembewu ye-coriander yaseTshayina, emva koko icolile kwaye ixutywe nesiselo, kabini ngosuku, i-7-8g ngexesha ngalinye.
-Nyanga iintlungu zesisu, urhudo
I-20g ye-decoction ye-flavour entsha yaseTshayina kunye ne-bulbs embalwa ye-lemongrass, amaqabunga ambalwa e-perilla, ukusela amanzi emini.
Sebenzisa i-50g ye-flavour yaseTshayina, usike ube ngamaqhekeza malunga ne-3-4cm ebukhali kunye nejinja entsha etyumkileyo kunye ne-400ml yamanzi. I-Sac yathatha i-200ml yamanzi, yahlulahlula kwiziselo ezi-2, iiyure ezi-3 zishiyana ngexesha ngalinye.
– Nyanga imikhuhlane
Thatha i-10g yevumba eliqinileyo laseTshayina eliqinileyo kunye ne-6g ye-licorice kunye ne-300ml yamanzi, ubilise imizuzu eyi-15 uze uhlukanise ngamaxesha ama-3, uphuze yonke imini.
– Unyango lwemasisi
Abantwana abasandul’ ukuzalwa bafanele bawatyumze amagqabi ekoriyanda aseTshayina baze bawafake kwilaphu elithambileyo, balihlikihle emzimbeni womntwana.
Abantwana abadala banokutya kwaye basele, emva koko i-decoction yevumba laseTshayina ukuba abantwana basele ukuvuselela inqaku lokufudumeza ukuba liphakame ngokukhawuleza kwaye liphilise ngokukhawuleza.
– Nyanga ukuchama ebhedini
Ivumba laseTshayina, ingca ye-betel nut, i-cilantro nganye i-20g, i-milkweed 10g, yonke inqunyulwe, yomisiwe, igqwesileyo kumanzi okusela emva kwesidlo sakusihlwa. Ukusebenzisa iintsuku ezi-3-4 kuya kunciphisa isifo.
– Unyango lokungagayeki:
Iimbatyisi yomisiwe 10g, iLicorice 6g, amanzi 300ml, ibilisiwe. Gcina ubilise imizuzu eyi-15. Sela amaxesha ama-3 ngosuku, usele ushushu.
TOP 100 các loại sâm ở Việt Nam và tác dụng của chúng | Hatgiongtihon.net
【Top】Các loại rau dễ trồng ngắn ngày không thể thiếu trong vườn nhà | Hatgiongtihon.net